Wararka - Farqiga u dhexeeya sifeynta dusha iyo sifeynta qoto dheer
Qalabka shaashadda waxaa inta badan loo adeegsadaa sifeynta dushiisa oo wax la dareemay ayaa loo adeegsadaa sifeynta qoto dheer. Kala duwanaanshuhu waa sida soo socota:
1. Maaddada shaashadda (monolon nylon, monofilament biraha) waxay si toos ah u dhexgashaa wasakhda ku jirta sifeynta dusha maaddada. Faa'iidooyinka ayaa ah in qaab -dhismeedka monofilament -ka si isdaba joog ah loo nadiifin karo oo kharashka wax -ku -oolku uu yar yahay; Laakiin faa'iido darradu waa habka sifeynta dushiisa, taas oo ay fududahay inay keento xannibaadda dusha sare ee bacda shaandhada. Noocan ah badeecada ayaa aad ugu habboon munaasabadaha sifeynta adag oo leh saxnaan hoose, iyo saxnaanta sifeynta waa 25-1200 μ m。
2. Maaddada la dareemay (marada cirbadda lagu duray, xalka la duubay dhar aan la tollayn) ayaa ah shaandhayn qotodheer oo saddex-cabbir ah oo qoto dheer, taas oo lagu garto qaab-dhismeedka fiber dabacsan iyo porosity sare, taas oo kordhisa awoodda wasakhda. Noocyada walxaha fiber -ka ah waxaa iska leh habka dhexda ee isku -darka, taas oo ah, walxaha waaweyn ee nijaasta ah ayaa lagu dhejiyaa dusha fiber -ka, halka walxaha wanaagsan ay ku xayiran yihiin lakabka qotada dheer ee walxaha shaandhada, sidaa darteed sifeynta ayaa leh sifeyn sare wax-ku-oolnimada, Intaa waxaa dheer, heerkulka sare ee daaweynta kulaylka dusha sare, taas oo ah, adeegsiga tikniyoolajiyadda deg-degga ah ee degdegga ah, waxay si wax ku ool ah uga hortagi kartaa fiber-ka inuu lumiyo saamaynta xawaaraha sare ee dheecaanka inta lagu jiro sifeynta; Qalabka la dareemay waa la tuuri karaa saxsanaanta sifeeyana waa 1-200 μ m。
Astaamaha ugu muhiimsan ee shaandhaynta dareeraha waa sida soo socota:
Polyester-fiber-filterka inta badan la isticmaalo, iska caabin kiimiko oo wanaagsan, heerkulka shaqada oo ka yar 170-190 ℃
Polypropylene waxaa loo isticmaalaa sifeynta dareeraha ee warshadaha kiimikada. Waxay leedahay iska caabin aad u fiican acid iyo alkali. Heerkulka shaqadiisu wuxuu ka yar yahay 100-110 ℃
Dhogor - waa hawl -qase ka -hortag wanaagsan, laakiin aan ku habboonayn aashitada ka -hortagga, sifeynta alkali
Nilong wuxuu leeyahay iska caabin kiimiko oo wanaagsan (marka laga reebo iska caabbinta aashitada), heerkulka shaqaduna wuxuu ka yar yahay 170-190 ℃
Fluoride waxay leedahay shaqada ugu fiican ee iska caabinta heerkulka iyo iska caabinta kiimikada, heerkulka shaqaduna wuxuu ka yar yahay 250-270 ℃
Isbarbardhigga faa'iidooyinka iyo waxyeellooyinka u dhexeeya shayga shaandhaynta dusha iyo walxaha shaandhaynta qoto dheer
Waxaa jira noocyo badan oo ah walxaha shaandhaynta sifeeyayaasha. Sida mesh silig -tolmo leh, waraaq shaandheyn ah, xaashi bir ah, shaandho shaandho oo la dareemo, iwm. Hase yeeshee, marka loo eego hababka shaandhaynta, waxaa loo qaybin karaa laba nooc, oo ah nooca dusha iyo nooca qotada dheer.
1. Maaddada shaandhaynta dusha
Qalabka shaandhaynta nooca dusha ayaa sidoo kale loo yaqaannaa shay shaandhayn buuxda ah. Dusha sare waxay leedahay joometeri gaar ah, makarafoor isku mid ah ama kanaallo. Waxaa loo isticmaalaa in lagu qabto wasakhda ku jirta saliidda xannibeysa. Qalabka shaandhayntu badanaa waa shaandheyn cad ama laba -laab ah oo ka samaysan silig bir ah, fiber maro ama qalab kale. Mabda'a shaandhayntu waxay la mid tahay isticmaalka shaashadda saxda ah. Xaqiijinta shaandhayntu waxay ku xidhan tahay cabbirrada joometeriga ee makarafoonnada iyo kanaalada.
Faa'iidooyinka walxaha shaandhaynta nooca dusha: muujinta saxda ah ee saxnaanta, baaxadda codsiga. Way fududahay in la nadiifiyo, dib loo isticmaali karo, nolol adeeg dheer.
Faa'iido darrooyinka walxaha shaandhaynta nooca dusha sare waa sida soo socota: qadar yar oo wasakhaysan; Sababtoo ah xaddidaadda tikniyoolajiyadda wax -soo -saarka, saxnaanta ayaa ka yar 10um
2. Wax shaandhayn qoto dheer leh
Qalabka shaandhaynta nooca qoto dheer ayaa sidoo kale loo yaqaannaa wax shaandhaynta nooca qoto dheer ah ama shaandhaynta nooca gudaha ah. Maaddada shaandhayntu waxay leedahay dhumuc gaar ah, oo loo fahmi karo inay tahay dulucda shaandheeyayaal badan oo dusha sare ah. Kanaalka gudaha wuxuu ka kooban yahay mid aan joogto ahayn oo aan lahayn baaxad qoto dheer. Markay saliiddu dhex marto shaandhada shaandhada, wasakhda ku jirta saliidda ayaa la qabtaa ama lagu dhejiyaa qoto dheer oo ka mid ah walxaha shaandhada. Si aad u ciyaarto doorka shaandhaynta. Waraaqda shaandhayntu waa shaandhayn qoto dheer oo caadi ah oo loo adeegsado nidaamka haydarooliga. Saxnaanta guud ahaan waxay u dhexeysaa 3 iyo 20um.
Faa'iidooyinka walxaha shaandhaynta nooca qoto dheer: qashin badan, cimri dheer oo adeeg, awood u leh inay ka saaraan qaybo badan oo ka yar saxnaanta iyo xariiqa, saxsanaanta sare ee shaandhaynta.
Faa'iido darrooyinka walxaha shaandhaynta nooca qotada dheer: ma jiro cabbir isku mid ah oo ka mid ah maaddada shaandhaynta. Cabbirka walxaha nijaasta ah si sax ah looma xakamayn karo; Waa wax aan macquul aheyn in la nadiifiyo. Intooda badan waa la tuuri karaa. Isticmaalku waa weyn yahay.